थोरै वर्षातमा पनि भक्तपुर किन डुबानमा पर्यो ? - Himalayan Kangaroo
थोरै वर्षातमा पनि भक्तपुर किन डुबानमा पर्यो ?
Posted by Himalayan Kangaroo | २८ असार २०७५, बिहीबार ०९:२२ |
काठमाडौं । बुधवार रातिको वर्षाका कारण भक्तपुरको हनुमन्ते खोलामा आएको बाढीले मध्यपुर लगायतका क्षेत्र डुबानमा परेका छन् ।
बाढीका कारण भक्तपुरका जगाती र बाराही क्षेत्रका वस्तीमा पानी पसेको छ भने भूकम्पपीडितको शिविर डुबानमा परेको छ । मध्यपुरथिमिका राधेराधे र कमेरोटार जग्गा एकीकरण आयोजनाभित्र रहेका वस्ती, नयाँ ठिमीको हनुमन्ते आसपासका क्षेत्र जलमग्न र डुबानमा परेका छन् । राधेराधे र त्यस क्षेत्रका वस्तीका साथै भाटभोटेनी सुपर मार्केटदेखि स्यामसुङ कम्पनीसम्म डुबान भएको छ । राधेराधे अगाडिदेखि सानोठिमी जाने निकोसेरासम्म नै डुबानमा परेपछि घरबाट निस्कने अवस्था नभएको स्थानीयवासी पुरुषोत्तम कार्कीले जानकारी दिए ।
जमिनबाट ४ फिट माथिसम्म पानी जमेपछि घरभित्र पानी पसेको छ । मध्यपुरथिमिमा अरनिको राजमार्ग खण्डका दुवै क्षेत्र डुबानमा परेका छन् ।
वस्ती डुबानमा पर्दा र सर्वसाधारणलाई आपत हुँदा मात्रै तात्ने सरकारी प्रवृत्तिले समय–समयमा डुबानका समस्या देखिन्छन् । यस्ता समस्यालाई विपक्षीले तत्काल सरकारको आलोचना गर्ने मौकाका रुपमा उपयोग मात्रै गर्नु अर्को बिडम्बना हो । मानव वस्ती योजनावद्ध र दीर्घकालीन सोचका साथ व्यवस्थित नगरिँदा डुबानको समस्या देखिन्छन् । यस्ता समस्याको समाधान के हुन सक्छ रु बेलैमा सोच्नुपर्छ । बुधवार एकैरातमा परेको पानीले वस्ती नै डुबाउने अवस्था किन आयो ?
भक्तपुरमा साढे २ दशकपछि डुबानको समस्या विकराल रुपमा देखिएको हो । मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमल ज्ञवालीका अनुसार २०५१ सालमा ठूलो डुबानको समस्या देखिएको थियो । ‘२४ वर्षपछि फेरि यसपालि ठूलो समस्या देखिएको छ,’ उनले भने ।
वर्षाको अनुपातमा ढलनिकासको व्यवस्था नहुँदा गहिरो क्षेत्रका वस्ती डुवानमा परेको उनको तर्क छ । ‘खोलानाला कतै पनि थुनिएका छैनन् । प्राकृतिक बहाव नै बढी भयो,’ उनले भने । खोला र निकास क्षेत्रमा पानी नअटाएपछि ढुबान भएको उनले बताए ।
Previousबिपी र अरनिको राजमार्ग खुल्यो, राेशी खाेलामा फसेका दुर्इ मजदुरकाे उद्दार
Nextअष्ट्रेलियाको ला ट्रोब युनिभर्सिटीमा उपलब्ध हुने कोर्स तथा छात्रवृत्ति
कालीकोटको खाँडागाउँमा भीषण आगलागी, ३० घर जले
९ पुष २०७५, सोमबार ०३:२२
गोर्कण विस्ट फराकिलो मतान्तरसहित विजयी
२३ मंसिर २०७४, शनिबार १४:५०